आईपीएलकाे अक्सनमा सन्दिपलाई कुन टिमले खरिद गर्ला ? - Nepal Cricket
आईपीएलकाे अक्सनमा सन्दिपलाई कुन टिमले खरिद गर्ला ?
आईपीएल २०२१ मिनी अक्सन १८ फेब्रुअरी २०२१ मा चेन्नईमा हुने छ। सबै टोलीले अक्सन अघि उनीहरूको नाम कायम राखेका र रिलिज गर्ने खेलाडीहरूको सूची घोषणा गरेका छन्। आरसीबी र एसआरएचले क्रमशः सबैभन्दा बढी र कम संख्यामा खेलाडीहरू जारी गरेका छन्। अन्य टोलीहरूले पनि खेल योजनाको आधारमा बिभिन्न किसिमका खेलाडीहरू जारी र राखेका छन्।
ग्लेन म्याक्सवेल र स्टीव स्मिथजस्ता ठूला विदेशी खेलाडीहरूलाई उनीहरुको टिमले रिलिज गरिसकेका छन् । र यी ठुला खेलाडीहरुको बिचमा रहेको एउटा नाम हो, युवा नेपाली स्पिनर, सन्दीप लामिछाने। लामिछानेले २०१८ मा दिल्ली फ्रेन्चाइजीबाट आईपीएलको शुरुआत गरेका थिए र यस वर्ष रिलिज हुनुअघि ३ सिजनका लागि टीमसँगै थिए।
जसमा उनले १३ विकेट पनि लिएका छन् । आईपीएल २०२० युएईमा खेल्ने क्रममा दिल्लीको आर अश्विन, अमित मिश्रा र एक्जोर पटेलको कडा र अनुभवी स्पिन हमलाले सन्दिपलाई पूरै सिजन बाहिर राख्न बाध्य तुल्यायो।
आइपीएल २०२१ अक्सनमा सन्दिपलाई छनोट गर्न सक्ने ४ शिर्ष टिमहरु ।
२०२१ को अक्सनमा सन्दिपलाई खरिद गर्नसक्ने टिमका रुपमा रोहित शर्माको कप्तानीमा रहेको मुम्बई इन्डियन्स रहेको छ । भारतीय एक सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो सिजनमा मुम्बई स्पिनरको खोजीमा हुनेछ ।
साविक विजेता मुम्बईले २०२० को आइपीएल मुख्य गरि तीन जना तिब्रगतिका बलरलाई लिएर खेलेको थियो । यदि यो सिजनको आइपीएल भारतमा भएको खण्डमा मुम्बईले आफ्नो रणनिती परिवर्तन गरेर स्पिनरलार्ई टिममा राख्ने संभावना रहेको छ ।
यो सिजनका लागि उसले टिममा रहेका चार विदेशी खेलाडीलाई रिलिज गरेको छ । जसमा मिचेल म्याक्लेनेघन, नाथन कोल्टनेल, जेम्स पाटिन्सन, लसिथ मालिंगा रहेका छन ।
मुम्बई टिममा सात खेलाडीको स्थान खालि रहेको छ । जसमा चार विदेशी खेलाडीको कोटापनि रिक्त छ । मुम्बईको टिममा राहुल चाहर बाहेक अरु स्पिनरको नाम छैन । तिब्रगतिका बलर ट्रेन्ट बोल्टको ब्याकअपका रुपमा मुम्बईले राम्रो विकल्प खोजिरहेको छ । एक सिजन अगाडी मुम्बईले श्रीलंकल स्पिनर अकिला धनन्जयलाई ट्राइ गरेको थियो । तर उनले खेलमा प्रभाव जमाउन सकेनन् ।
यदि यो सिजनमा मुम्बईले सन्दिपलाई खरिद गरेमा अवस्था फरक हुन सक्ने क्रिकेट ट्रयाकरले बताएको छ । मुम्बईले जसप्रित बुर्माल, ट्रेन्ट बोल्ट, राहुल चाहर सन्दिपको कम्बिनेसन टिमलाई राम्रो हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ ।
२. राजस्थान रोयल्स
आइपीएलको अक्सनमा सन्दिपमा चासो दिन सक्ने टिममा एक हो राजस्थान रोयल्र्स । यो मिनी अक्सनमा राजस्थानले तीन जना विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउने स्लट खालि रहेको छ । यसअघिका कप्तान स्टिभ स्मिथलाई रिलिज गरेको राजस्थानले सञ्जु सामसनलाई पहिलो पटक कप्तानी दिएको छ ।
राजस्थानले टिममा चार विदेशी खेलाडी लिने प्रावधानमा तीन जना जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक र जोस बट्लरलाई भित्र्याउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । चौथो विदेशी खेलाडीका रुपमा उसले सन्दिपलाई ल्याउने संभावना कायमै छ ।
किनकी सन्दिपलाई अनुबन्ध गरेमा उसलाई नेपाली समर्थकको साथ पाइन्छ भन्ने पुर्ण रुपमा थाहा छ । त्यसमा पनि यो सिजनमा राजस्थानले केहि परिवर्तनको रणनिती अपनाएको छ । उसले युवा खेलाडीलाई टिममा राख्ने योजना बनाएको छ ।
३. पंजाब किंग्स
गत सिजन प्लेइङ ११ खोज्नमै झन्झट देखिएको पंजाबले यस सिजन पुर्ण तयारी थालेको देखिन्छ ।
उनीहरुले मुजिब उर रहमानलाई रिलीज गरेको छ । जसले २०२० आईपीएलमा धेरै खेल खेलेका थिएनन् । यो पटक उनको स्थानमा बिकल्पका रूपमा सन्दीप लामिछानेलाई टीममा लिने संभावना पनि कायमै छ ।
लामिछानेले विश्वभरि धेरै टी २० लीग खेलेका छन् र त्यहाँ उनको अनुभव उपयोगी हुनेछ। त्यसमा पनि भारतीय भूमीमा स्पिनरको फाइदा टिमले राम्रो बुझेको पनि छ । यदि एक मौका दिइयो भने सन्दिपले टिमको साथमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्नेछन् ।
४. कोलकता नाइट राइडर्स
गत सिजन अन्तिम प्लेअफ स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने धेरै टोलीमध्ये नाइट राइडर्स पनि एक थियो । सुनील नारेनले गत सिजनमा केकेआरको लागि ब्याटिङ खोलेका थिए तर त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यसो भए, यदि उनलाई एक अलराउन्डरको रूपमा खेलाइने छैन भने उसलाई प्रतिस्थापन गर्न उचित स्पिनरको आवश्यक पर्दछ।
नारेन र रसेलको पछिल्लो सिजनमा धेरैपटक घाइते भएका थिए, यदि फेरि यस्तै केही भयो भने, उनीहरु लामिछानेमा एक उत्तम ब्याकअप हुनेछ।
उनले बलिङ लाइनअपमा आवश्यक सहयोग गर्न सक्ने संभावा छ । उनीहरूको टोलीमा कुलदीप यादव बाहेक अरू कुनै लेगस्पिनर छैन ।